Dr. Betsy Basch - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Dr. Basch waa aqoonyahan ruqsad haysta oo ruqsad haysta, lataliye ruqsad haysta oo madaxbanaan, La-taliye Qaran oo La Aqoonsaday, iyo khabiir cilminafsiyeed dugsi. Waxay ka shaqeyneysay meelo kala duwan oo caafimaadka maskaxda & waxbarashada ah muddo 20 sano ah. Waxay leedahay danaha guud ee gaarsiinta iyo horumarinta dhaqan ahaan karti leh, dhaqan ahaan ka warqabta oo loo dhan yahay jawiga bulshada-shucuurta, tababarka, wax ka qabadka daaweynta iyo qiimeynta waxayna ku soo bandhigtay mowduucyo sida dabacsanaanta, dhaqanka iyo cudurada maskaxda, naafonimada iyo galmada, naafonimada iyo aqoonsiga, qaybaha dhaqanka caafimaadka bulshada iyo barnaamijyo iyo cabbiraad dhaqan ahaan karti u leh. Waxay u shaqeysaa si loo fududeeyo wadahadalka mowduucyada isgoysyada ee ka kooban naafonimada, waxayna u aragtaa kaqeybgalku inuu yahay geedi socod soo jiidasho leh oo cabsi leh!
Dr. Basch wuxuu leeyahay BS cilmu-nafsiyeed, qaan-gaar ah xagga tababarka isboortiga iyo feejignaanta falsafadda. Master-ka & doctorate-ka waxay ku jiraan La-talinta Caafimaadka, iyo Cilmu-nafsiga iyo Iskuulka Maskaxda ee Jaamacadda Argosy-Phoenix. Iyadu waa iyaduna xirfadle ciyaartooy, waxayna u ciyaarto Arizona Sidewinders.
CEC Castle Rock, Xadgudubyada CEC, Parker CEC, Maamulka CECCR, Maamulka CECI, Maamulka CECP